Soosaarka Shiinaha Slimming cream iyo Warshad | Wangtong
Mabda'a kareemka khafiifka ah wuxuu inta badan ku saleysan yahay dejinta, qaybaha bullaacadaha, kafeega, kaabsaaska si kor loogu qaado kala-baxa baruurta, loo dardar-galiyo wareegga gudaha ee dheef-shiid kiimikaadka.
Ilaa aad ku adkaysato adeegsiga iyo duugista, xawaaraha saameynta waxaa lagu qiyaasi karaa inay aad u gaabis tahay, mar labaad, baahida loo qabo in la isku daro farsamooyinka dhaqdhaqaaqa iyo duugista.
Saamaynta muddada-gaaban ee habka ugu dhakhsaha badan ayaa ah, mari kareemka jirka si aad u duugto nuugista ka dib dhaqdhaqaaqa.
Waxaa sidoo kale lagu duubi karaa balaastig si kor loogu qaado dhididka iyo xoojinta miisaanka deegaanka.
Wuxuu kobciyaa badeecada kareemka khafiifka ah si loogu isticmaalo dibadda oo keliya, mari maqaarka si loo yareeyo hypodermic iyo adipose, jirka ka dhigo mid xoog leh oo qurux badan fasalka gaarka ah ee waxyaabaha la isku qurxiyo ee maqaarka, oo ay ku jiraan dhammaan noocyada dufanka gubanaya, maqaarka ku ilaali “walaxda. Kali ahaan ayaa loo istcimaalaa, way gubi kartaa baruurta, way ka saari kartaa diirka liinta, adkeyn kartaa maqaarka dabacsan, haddii jimicsi la socdo, saameyn aad u fiican oo dib u soo noqda ayaa qalooca jilicsan iyo nimcada leh!
Inta badan isticmaalka dibedda ee badeecadaha khafiifinta ah waa isticmaalka geedo dabiici ah soo saarista maaddooyinka firfircoon si wax ku ool ah, qodobadan firfircoon waxaa loo adeegsan karaa in lagu ururiyo unugyada subagga jirka ee subagga badan, kor u qaadista maqaarka maqaarka iyo in la yareeyo baruurta uruurinta, si loo gaaro himilada jir dhuuban.
Shaaha polyphenols - GTP-ga qaniga ah, ee la sameeyay ayaa door xoog leh ka leh baabi'inta xagjirnimada bilaashka ah ee waxyeellada leh, ka-hortagga oksaydhka waqtigiisa aan la gaadhin.
Biyaha, Liinta Paraffin, Ethyl Hexyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Polydimethylsiloxane, Glycerin, Propanediol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol Polyether-25, Cetearyl Alcohol Polyether-6, Chamomilla Recutita Ubaxa Soosaarka, Allantoin, Carb
Markaad isticmaaleyso kareemka khafiifka ah, qaybaha kala duwan waxay u baahan yihiin farsamooyin duug ah oo kala duwan. Mabda 'ahaan, badanaa waxay ka timaaddaa booska ka fog wadnaha illaa booska u dhow amarka duugista, hoosta ilaa sare, laga bilaabo jihada gudaha iyo dibedda ee duugista.
U mari kareemka khafiifinta si siman caloosha, ka dibna si tartiib ah saacadda ugu duug ilaa ay sheyga si buuxda u nuugo.
Baabacada labada gacmood ayaa sidoo kale la isticmaali karaa marka la duugaayo maqaarka caloosha, si loo dardar galiyo wareegga dhiigga, waxay ka caawisaa maqaarka nuugista maaddooyinka wax ku oolka ah.
Si aad ugu isticmaasho lugaha, dhig cagahaaga sare isla markaana mari kareemka caatada ah bowdyahaaga.
Dul suulka labada gacmood bowdyaha, saar culays suulasha, oo adkee faraha kale oo ku xoq dhanka suulka.
Ku soo celi bowdyahaaga ilaa jilbahaaga.
Guud ahaan, kareemka caatada ah ee la isticmaalo daqiiqado yar ka dib si ay u bilaabaan inay shaqeeyaan, waxay socon karaan dhowr saacadood. Noocyada qaarkood sababo la xiriira farqiga u ah maaddada iyo kareemka khafiifinta waxtarka leh, waa iyada oo aan wax dareen jir ah lahayn. Qayb ka mid ah isticmaalka kareemka khafiifka ah ee qandhada maxalliga ah, waxtarka waxaa la siiyaa mudnaanta leh dufanka maxalliga ah, mabda'a kululaynta ee capsicum ama kafeyn, kan hore ayaa ka xiiso badan oo xasaasiyad leh, kan dambe ayaa ka jilicsan oo waxtar leh. waa dareenka doorka noocan ah inta badan waxay mudnaanta siinayaan si loo adkeeyo maqaarka, maqaarku wuxuu leeyahay adkeyn adag oo adag. Haddii aad isticmaaleyso raaxo daro ama cuncun deegaanka ah, waa inaad isla markaaba joojisaa isticmaalkeeda.
Waqtiga ugu fiican ee la isticmaalo
1. Toos subaxda, waa daqiiqad, shaqada jidhka bini'aadamka ayaa ah dheef-shiid kiimikaadka ugu firfircoon uguna dhakhsaha badan. Horta afafka hore qubays kulul, ka dibna jirka la mariyo oo ah qaab kareem duug ah, ayaa u oggolaan kara saameynta khafiifka ah ee labanlaabidda natiijada oo leh kalabar dadaalka.
2. Ka dib guriga markii aad tagto habeenkii, haddii ka faa'iideysiga jirka ka dib qubayska weli aad u kulul yahay marka la sameynayo duugista jirka oo dhan, oo u baahan qaybo jidhka khafiif ah sida gacanta sare, dhexda iyo caloosha, miskaha, bowdyaha, iyo furaha kale duugis meel ah, waxay dardargelin kartaa dheef-shiid kiimikaadka wareegga dhiigga, ka dib kareemka jilicsan ee jilicsan, wuxuu sameyn karaa saameyn khafiif ah oo jidhka ah oo muuqata, mana fududa in dib loo soo celiyo.
3. Samee jimicsi jirka, samee dufanka maqaarka jirka ee naaska dhexdiisa wuu yaraaday, sidaas darteed lakabka kareemka caatada ah jimicsiga kahor, jirka si dhaqso ah ma u sameyn karaa, si fiican u nuugi karaa maaddooyinka firfircoon ee ku jira kareemka caatada ah, saameynta jirka oo khafiif ah ayaa loo sameeyay si loo helo si firfircoon oo cad.
Arrimaha u baahan fiiro gaar ah:
1. Kahor intaadan isticmaalin kareemka slimming-ka waa fikrad wanaagsan inaad isticmaasho khafiifinta jirka ourzi) ka saar maqaarka xad-dhaafka ah iyo maqaarka dhintay, u dammaanad qaado sheyga qaybaha fir fircoonida si loo gaaro saameynta ugu wanaagsan. Laakiin ka taxaddar inaadan u isticmaalin meelaha jilicsan sida waxsoosaarka laabta, haddii aad leedahay caabuq ama nabarro maqaarka ku yaal, sidoo kale fadlan iska ilaali inaad isticmaasho, inta badanna waxaad isticmaashaa laba jeer usbuucii.
2. Xilliga xagaaga badanaa wuxuu ubaahan yahay in laga saaro timaha jirka, kahor iyo kadib isticmaalka timo jarista) ama mandiil, kuma haboona isticmaalka alaabada khafiifka ah, haddii kale way fududahay in la keeno xasaasiyad, casaan qeybaha nugul ee dhaawaca Muunada kuma haboona.
Hore: Maaskarada bushimaha
Xiga: Kareemka gacanta